मधेसको राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » प्रदेश » ब्लग » राजनीति अंक: 7503
मधेसको राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति !
जनता समाजवादी पार्टीको पृष्ठभूमि के हो ? धेरैलाई लागेको छ – भारतीय निकटता । हो पनि यो पार्टीको स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो उत्तर चित्तबुझ्दो लाग्छ । यसका लागि पुग्नुपर्छ सद्भावना पार्टीसम्म । यद्यपि यो पार्टीको स्थापना पञ्चायत कालमै भएको थियो । संस्थापक नेता थिए – गजेन्द्र नारायण सिंह । तिनै गज्जुबाबु जो प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि बनेका प्राय सबै सरकारमा मन्त्री रहे ।
मृत्यु पर्यन्त उनी त्यही हैसियत र पहिचानमा थिए । जहाँ गज्जुबाबु त्यहीं मन्त्री । त्यो संस्कारबाट जन्मे अरु मधेसवादी दलहरु । सुरुमा आयो गणतान्त्रिक फोरम । एउटा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा जन्मेको यो संस्था कालान्तरमा गज्जुबाबुको प्रतिरुप बन्न खोज्यो । तर मधेसी नेता जो सत्ताका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए, त्यही चरित्र देखाए उनीहरुले पनि ।
त्यसैको सिको गर्दै मधेसमा अरु धेरै दलहरु जन्मन खोजे । तर अस्तित्वमा आयो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी । फोरमको विकल्पमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका महन्थ ठाकुर यसको नेता बने । त्यसपछि मधेसी जनताको नाममा धेरै कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेता जाई लागे । वस्तुत उनीहरुको ध्याउन्न केवल सत्ता प्राप्तिसँग थियो । त्यसैले उनीहरुको एकता कहिल्यै भएन । बेला बेला स्वाथमिल्दा नमिल्दा उनीहरु एकैथलोमा देखिएपनि कहिल्यै मिलन थिएन र छैन पनि । त्यसको पछिल्लो श्रृँखलाका रुपमा जनता समाजवादी पार्टीको वर्तमान अवस्था हेरे पुग्छ ।
दुई अलग पृष्ठभूमि र लगानीका आधारमा स्थापना भएका पार्टी गत आम निर्वाचनमा पनि अलगै थिए । गएको बर्ष जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याए , अनि मात्रै दुई अलग पार्टी एक भएका थिए । त्यसमा उनीहरुको आफ्नै स्वार्थ थियो । समयक्रममा फेरि तिनै दुई पार्टीको पुरानै हैसियत प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराइ दिएका छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले दक्षिणतिरको सहयोग प्राप्त गर्न थालेपछि जसपाको एउटा गुट उनको लगौंटी बनेको छ । त्यसको नेतृत्व महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेका छन् ।
कुनैबेला थियो – ओली भनेको साँच्चै राष्टवादी नेता हो भन्ने । तर ओली न त राष्ट्रवादी थिए न पछि नै रहलान् । त्यसैले वर्तमानमा हुने त कुरै भएन । केवल भ्रम सिर्जना गर्न भारतीय संस्थापन पक्षले नै यस्तो नाटक गरेको थियो । ओली त एउटा पात्र मात्र थिए । त्यसको पटाक्षेप गएको वर्ष भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ प्रमुख सावन्त गोयलको भ्रमणबाटै प्रष्ट भएको थियो ।
त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले त्यही पुष्टी गरेको छ । नभन्दै जसपाको एउटा पक्षले ओलीलाई जोगाउन जुन भूमिका खेल्यो त्यसबाट सबै छर्लङ्ग भएको छ । अब भारतीय पक्षको नेतृत्व खुलेरै ओली गर्दैछन् भन्ने प्रमाणित गर्न जसपाको यो गुटको गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा फेरि जसपा भित्रको खिचातानीले नयाँ मोड लिएको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष खुलेरै ओलीको विरोधमा देखिएको छ । उसको स्वार्थ भनेको भारतीय पक्षले आफूहरुलाई कम महत्व दिएको भन्ने हो ।
तर उनीहरु यतिबेला लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले उनीहरुको अरु पाटो खासै महत्वपूर्ण छैन । जे भएपनि मधेसवादी पार्टीको लक्ष्य र उदेश्य भनेको केवल सत्ता अनि फेरि सत्ता मात्रै हो । त्यसको पटाक्षेप अब नयाँ रुपमा हुँदैछ । जसपाको महन्थ – राजेन्द्र समूह अबको केही दिन भित्रै सत्तामा पुग्दैछ । किनभने भारतीय पक्षले उनीहरुलाई समेत सत्तामा राखेर चुनाव गर्न चाहेको छ । उनीहरुलाई सत्ताको भ¥याङ्ग उक्लिन केही निहुँ चाहिएको हो । त्यो काम ओलीले सुरु गरिसके । १२० जनालाई जेलबाट रिहा गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको सरकारले आजै मात्र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो अध्यादेशले नेपालमा भारतीय नागरिकले सहजै वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ ।
यसैलाई आधार बनाएर जसपाको महन्थ समूह सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । त्यसका लागि उनीहरुले एउटा प्रस्ताव राखेका छन् ओली समक्ष । त्यो के भने – ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने । त्यसैका आधारमा महन्थ समूह सत्तारोहण गर्ने । सम्भवतः भोलि वा पर्सि नै यो प्रकृया सुरु हुनेछ । ओलीले यस्तो आह्वान गरेलगत्तै महन्थ पक्ष सत्तामा जाने भएको छ ।
तर संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धामा भोलि सर्वाेच्च अदालतले कस्तो आदेश दिने हो त्यो पनि महन्थ समूहले हेरिरहेको छ । त्यसैले यसको छिनोफानो भएपछि मात्रै सत्तारोहणका विषयमा निक्र्यौल गर्ने कि भन्ने प्रसंगसमेत उठेको छ । तर ढिलोचाँडो महन्थ समूह सत्तामा जाने चाहिं निश्चित छ ।